1 Samuel 8 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Samuel Nhoma a Edi Kan 8:1-22
Israelfo kae sɛ wɔpɛ ɔhene (1-9)
Samuel bɔɔ ɔman no kɔkɔ (10-18)
Yehowa penee so maa wɔn ɔhene (19-22)
8 Bere a Samuel bɔɔ akwakoraa no, ɔde ne mma sisii Israel so ma wɔyɛɛ atemmufo. 2 N’abakan din de Yoel, na nea ɔto so abien no din de Abia,+ na wobuu atɛn wɔ Beer-Seba. 3 Nanso ne mma no amfa n’akwan so; wodii mfaso bɔne+ akyi, wogyee adanmude,*+ na wɔkyeaa atemmu.+ 4 Akyiri yi, Israel mpanyimfo nyinaa boaa wɔn ho ano baa Samuel nkyɛn wɔ Rama. 5 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ! Woabɔ akwakoraa, na wo mma nso amfa w’akwan so. Enti si yɛn so hene na ommu yɛn atɛn sɛ aman a aka no nyinaa.”+ 6 Nanso Samuel ani annye ho* sɛ wɔkae sɛ: “Ma yɛn ɔhene na ommu yɛn atɛn.” Ɛnna Samuel bɔɔ Yehowa mpae. 7 Na Yehowa ka kyerɛɛ Samuel sɛ: “Nea ɔman no aka nyinaa, tie wɔn, efisɛ ɛnyɛ wo na wɔapo wo; me mmom na wɔapo me a wɔmpɛ sɛ midi wɔn so hene bio.+ 8 Efi da a miyii wɔn fii Egypt bae besi nnɛ, daa wogyaw me+ kɔsom anyame foforo,+ na saa ara na wɔde reyɛ wo yi. 9 Enti tie wɔn. Nanso bɔ wɔn kɔkɔ na wonhu nneɛma a sɛ ɔhene bedi wɔn so a, ne tumi nti ɔbɛyɛ.” 10 Enti bere a ɔman no kae sɛ wɔpɛ ɔhene no, Samuel kaa Yehowa nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ wɔn. 11 Ɔkae sɛ: “Ɔhene a obedi mo so no, ne tumi nti, nea ɔbɛyɛ ni:+ Ɔbɛfa mo mma mmarima,+ na wama wɔaka ne nteaseɛnam+ na wɔatena n’apɔnkɔ so,+ na ebinom betu mmirika adi ne nteaseɛnam anim. 12 Ɔde wɔn mu bi bɛyɛ apem apem so ahwɛfo+ ne aduonum aduonum so ahwɛfo,+ na ebinom befuntum n’asaase+ na wɔatwa ne nnɔbae,+ na wɔbɛyeyɛ n’akode ne ne nteaseɛnam ho nneɛma.+ 13 Ɔbɛma mo mma mmea afra* sradehuam, anoa nnuan, na wɔato paanoo.+ 14 Mo mfuw ne mo bobefuw* ne mo ngodua mfuw+ mu nea eye no, ɔbɛfa na ɔde ama ne nkoa. 15 Mo mfuw mu aba ne mo bobefuw mu aba nso, obegye so ntotoso du du ama n’ahemfi mpanyimfo ne ne nkoa. 16 Ɔbɛfa mo nkoa ne mo mfenaa ne mo mmoa mu nea eye ne mo mfurum de wɔn ayɛ n’adwuma.+ 17 Obegye mo nguan so ntotoso du du,+ na mobɛyɛ ne nkoa. 18 Da bi reba a mo hene a moapaw no no nti, mubesu,+ nanso saa da no, Yehowa rennye mo so.” 19 Nanso ɔman no antie Samuel, na wɔkae sɛ: “Daabi, yɛn de, ɔhene ara na yɛpɛ. 20 Yɛn nso yɛbɛyɛ sɛ aman a aka no nyinaa, na yɛn hene bebu yɛn atɛn, na wadi yɛn anim ako yɛn ko ama yɛn.” 21 Bere a Samuel tiee ɔman no nsɛm no nyinaa no, ɔka kyerɛɛ Yehowa. 22 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Samuel sɛ: “Tie wɔn na si wɔn so hene.”+ Afei Samuel ka kyerɛɛ Israel mmarima no sɛ: “Obiara nsan nkɔ ne kurow mu.”
^ Nt., “ɛyɛɛ Samuel ani so bɔne.”
^ Anaa “ayɛ.”